Qiimo - Forex Lens
Xubinnimada Ganacsade Pro oo leh qiimo dhimis Billo Baddan ah
Qolka Ganacsiga ee Forex
Wada daawo, wax barta oo ka wada faa iidee qolka ganacsiga
Hoos waxaa ku qoran Qorsheyaasha Qiimaha noo ah Xubinnimada Ganacsade Pro halkaasoo aad marin uga heli doontid Qolkeenna Ganacsi ee aan lala tartamin ee soo bandhigaya qulqulo maalmeedyo fara badan oo maalinle ah maalintii oo dhan oo ka yimaada falanqeeyayaashayada Farsamada, oo bixiya fikrado ganacsi oo macquul ah. Waxa kale oo aad marin buuxa u heli doontaa maktabaddeenna fiidiyowyada waxbarashadda oo ku baraya wax ku saabsan ganacsiga Smart Money, iyo qalabka ganacsiga ee ganacsigu u baahan yahay inuu ku guuleysto ka ganacsiga Forex.
Xubinnimada Ganacsade Pro waa halka ay maalinti ganacsatada u yimaadaan si ay ganacsigooda ugu geeyaan heerka xiga, iyadoo aan loo eegin heerka khibraddaadu tahay. Waa inaad tixgelisaa inaad nagu soo biirto haddii aad naftaada u aaminsan tahay inaad ka mid tahay kuwa soo socda:
Ganacsade bilow ah:
Ma lihid wax yar oo khibrad ah oo aad raadineyso inaad bilowdo ganacsi. Ama waxaa laga yaabaa inaad tahay qof cusub oo weli waxyaabo kala soocaya. Waxaan ku bari doonnaa aasaasiga aasaasiga ah ee 'A ilaa Z', laga bilaabo sida loo bilaabo xisaabtanka Demo ee aan khatarta lahayn iyo qaadashada fikraddaada ganacsi ee ugu horreysa si aad ugu diyaar garowdo xisaab toos ah.
Ganacsade aan faa'iido doon ahayn:
Waxaad ka ganacsanaysay (ama aad iskudayeyso inaad ganacsato) muddo dhan 3-12 bilood, ama laga yaabee inaad intaas ka sii dheer tahay. Wali waxaad raadineysaa istiraatiijiyad ganacsi oo wanaagsan oo adiga kuu shaqeyn doonta. Waxaan ku bari doonaa sida loo horumariyo istiraatiijiyaddaada iyadoo la adeegsanayo habka xirfadle ee suuqyada, sida loo hirgeliyo maareynta halista dhawaaqa, iyo ilaalinta cilmu-nafsiga ganacsiga wanaagsan.
Waxaad haysataa 1-3 sano oo khibrad ganacsi ah. Si kastaba ha noqotee, wali wali ma helin raad ganacsi dhab ah oo si joogto ah faa'iido ugu leh xeeladahaaga. Waxaan kaa caawin doonaa inaad ka gudubto wareegga wareegga ee kororka iyo hoos u dhaca oo aad noqotid ganacsade faa'iido leh adoo adeegsanaya maareynta halista dhawaaqa, iyo istiraatiijiyad ku saleysan qaanuunka.
Ganacsade faa'iido leh:
Waxaad horayba u gaadhay joogteyn iyo faa'iido ganacsade ahaan. Waxaa laga yaabaa inaad raadineyso ilo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay fikradaha ganacsi ee suurtagalka ah iyo qaabeynta ganacsiga si ay kaaga caawiyaan inaad waqtigaaga ka ilaaliso jadwalka, ama, si aad uga hesho fikrad ka duwan falanqayntaada ganacsiga. Maskaxda waaweyni waxay u muuqdaan inay si isku mid ah u fikiraan (ama ka geddisan yihiin) haddaba aan wadajir wax u maareyno!
Fiiri ah # jadwal todobaadle ah kanaalka ku jira khilaafkeenna markii aan LIVE aadno!
Nagala soo xiriir warbaahinta bulshada: https://myurls.bio/theforexlens